उच्च रक्तचाप, मधुमेहका बिरामीले कोभिड संक्रमण हुँदा नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि खान हुन्छ कि हुँदैन? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
उच्च रक्तचाप, मधुमेहका बिरामीले कोभिड संक्रमण हुँदा नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि खान हुन्छ कि हुँदैन?
स्वास्थ्यखबर आइतबार, असार ६, २०७८, १९:२८:२७
प्रश्न: उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घकालिन रोगका बिरामीहरुले कोभिड १९ संक्रमण हुँदा नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि खान हुन्छ कि हुँदैन?
उत्तर : हुन्छ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगका औषधि सेवन गर्नाले कोभिड १९ संक्रमितमा कुनै जटिलता सिर्जना गर्दैन। बरु तपाइँले खाने नियमित औषधि छोड्नु भयो भने उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहले गर्दा थप जटिलता बढ्न जान्छ। त्यसैले कोभिड १९ संक्रमण भएर आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ र लक्षण देखिएका छन् भने पनि तपाइँले नियमितरुपमा लिनुपर्ने औषधि सेवन गर्नुपर्छ।
यस्तो बेलामा आइसोलेसनमा रहँदा रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रणमा राख्न हल्का व्यायाम गर्नुहोस्, मदिरा सेवन र धूम्रपान पटक्कै नगर्नुहोस् र पोषणयुक्त खानेकुरा खानुहोस्।